Ciidamada Kenya oo duqeyn dhina cirka ah ku xasuuqay xoola dhaqato Soomaaliyeed |
Ciidamada Kenya oo duqeyn dhina cirka ah ku xasuuqay xoola dhaqato Soomaaliyeed
Ugu yaraan 3 Ruux oo Xoolo dhaqato ah ayaa ku dhaawacmay Duqeymo Diyaaradeed oo laga fuliyay Degaanada Alwiile iyo Warta dhadhaable oo u dhaxeysa Degmada Ceel Waaq iyo Degaanka Ceelcade ee Gobolka Gedo.
Sida Wararka ay sheegayaan Duqeymahan ayaa sidoo kale waxaa ku baaba’ay Xoolo Iyadoona Degaanda la Duqeeyay ay gacanta ku hayaan Dagaal yahano ka tirsan Ururka Al Shabab kuwaa oo lala damacsanaa Weerarka.
Diyaaradahan Dagaal ee Duqeymaha Qasaaraha geystay ka fuliyay Degaanada Alwiile iyo Warta dhadhaable oo u dhaxeysa Degmada Ceel Waaq iyo Degaanka Ceelcade ee Gobolka Gedo ayaan la shaacin Dalka laga leeyahay.
Xaalada ayaa deggan waxaana la sheegayaa in Degaanada la Weeraray ay soo gaareen Al Shabaab islamarkaana ay isku geedaameen sida Dadka Degaanka ay sheegeen.
Majiro wax hadal ah oo ka soo baxay Saraakiisha Ururka Al Shabaab oo ku aadan Weerar Duqeymo ahaa oo lala damacsanaa kaa oo ka dhacay Degaano ka tirsan Gobolka Gedo.